दुःखको शरीर को एक संकेत - सबैलाई कि दाँत दुखाइ लक्षण थाह छ। सबै भन्दा राम्रो निर्णय दन्त चिकित्सक एक यात्रा हुनेछ। तर, यस्तो समस्याहरूको अक्सर त्यहाँ मद्दत (सप्ताह यात्रा, अवकाश या रात समय) को लागि अनुरोध गर्न कुनै तरिका हो जब एक समयमा आउँदैन। साँच्चै त्यहाँ मात्र सहन छ, जब एक दाँतको दुखाइको? अवस्था कम गर्न घरमा के गर्न?
आत्म-दबाइ मात्र अस्थायी वैकल्पिक समाधान रूपमा अनुमति दिएको छ
यो परम्परागत व्यञ्जनहरु Blunt कि सक्नुहुन्छ वा पूर्ण दुखाइ निर्मूल, तर दाँत उपचार गर्न असम्भव छ त्यसैले वास्तवमा लागि खाता महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ, लक्षण टाढा जाने पछि दन्त चिकित्सक गर्न बन्द एक यात्रा राख्न हतार छैन।
तपाईं दुखाइ चिन्तित छन् कसरी समयमा, यो मौखिक स्वच्छता प्रक्रियाहरु बच्न छैन आवश्यक छ। धेरै दुखेको ठाउँ रीस उठाउनु छैन राम्रो छ भन्ने गलत विश्वास मा, आफ्नो दाँत ती दिनमा माझ्छु गर्न डराउँछन्। यो त छैन।
यसलाई कडा दाँतको दुखाइको जब गोली लिन उचित छ। के अर्को के गर्ने? आखिर, analgesics को कार्य समय सीमित छ। र यो आफ्नो प्याकेजहरू पिउन चाहनुहुन्छ छैन। त्यहाँ शरीर हानि गर्दैन राज्य सुविधा हुनेछ कि धेरै लोकप्रिय व्यञ्जनहरु छन्।
कुल्ला गंभीर दाँतको दुखाइको छुटकारा गर्न मद्दत गर्छ
प्रभावकारी विधि सधैं एक दाँतको दुखाइको जब मौखिक गुहा rinsing छलफल गरिएको छ। कसरी कुल्ला गर्न? यहाँ सबै भन्दा लोकप्रिय व्यञ्जनहरु केही, जो हरेक घरमा हात मा हो को घटक हो।
साधारण नुस्खा - न्यानो पानी वा सोडा नुन (पानी चम्मच ग्लास) संग rinsing। एक समाधान जस्तै जो एक लाभ छ, चाँडै तयार छ। विशेष गरी तपाईं एक दाँतको दुखाइको हुँदा। "के म हालत कम गर्न घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ?" - यी क्षणमा महत्त्वपूर्ण छ मात्र प्रश्न छ। तर, यो नुस्खा छैन दुरुपयोग गर्न सकिन्छ, वा सोडा वा नुन को mucosa नष्ट हुनेछ को मौखिक गुहा। सानो घाउ नयाँ बेचैनी ल्याउन सक्छ भनेर गठन।
Yarrow neutralize गर्ने क्षमता छ दाँतको दुखाइको। एक decoction तयार र माथि वर्णन जस्तै तरिकामा आवश्यक यसलाई लागू हुन्छ।
पीडादायी aching दुखाइ को छुटकारा प्राप्त गर्न, जडीबुटी को प्रस्तावित उमालेर बनाउनु को एक: टंकशाला, कागति बाम, Rosemary, chamomile। दुई कला को दर मा शोरबा तयार। प्रति पानी कप चमचा।
तपाईंको कुल्ला मुख पनि उपचार दाँत डाक्टर पछि बन्द गर्न सक्दैन यस्तो सरल माध्यम संग। आवधिक सत्र मुख मा भडकाऊ प्रक्रिया को रोकथाम सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ।
तपाईं एक दाँतको दुखाइको छ भने तेल, मदत गर्नेछ। के, घर मा गर्न नियालेर। तेल वा ल्वाड़ धनिया मा डूबा सानो कपास swab, रोगी को दाँत देखि गम लागू गरिएको छ। यस्तो विधि धेरै राम्रो छ विभिन्न प्रकृति को दर्दनाक sensations संग मद्दत गर्छ। गर्भवती महिलाका लागि उपयुक्त। यो स्वागत गर्दा, गर्भावस्था को पहिलो केही महिनामा विशेष गरी साँचो हो painkillers को अति खराब छ।
यस्तो सरल तरिका अपनाए छन् लिइरहेको, यो तपाईं एक दाँतको दुखाइको छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा भूल गर्न सम्भव छ। के अब घर मा के गर्ने? को twinges तल गोली वा एक पटक र सबै को लागि दन्त चिकित्सक कार्यालय मा एक समस्या समाधान - यो आफूलाई लागि सबैको।
एक बच्चा मा Herpes मुखशोथ: लक्षण र उपचार
के मुखशोथ उपायहरु? कारण र लक्षण
को मा दन्त चिकित्सक द्वारा सामना घृणित कुराहरू
सेक्स भन्दा उपयोगी?
वोदका Absolut: स्वीडिश गुणस्तर को विश्वव्यापी मान्यता
नाम आशा को अर्थ के हो
Irina मेदभेदेभ - अभिनेत्री र गायक। जीवनी र व्यक्तिगत जीवन Irina Medvedeva
उत्सव सुन्दर सलाद। सलाद, तरकारी र अन्डा लागि सजावट
दबाइ, मालिश: शिशुहरू मा कफ कसरी deduce गर्न
प्रसिद्ध "वन मृग", वा कसरी Panther सुन्दर horned बन्न